Chii chinonzi Kurudziro Injini uye Inogonesa Sei Kusarudzika? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, eCommerce, chitoro, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Chii chinonzi Injini Yekukurudzira uye Inoigonesa Sei Kugadzira?
A injini yekukurudzira (kana system) ndeye algorithm inoongorora maitiro emushandisi kuratidza zvinhu zvavanogona kusarudza. Iyo yekukurudzira sisitimu inoshandisa dhata yekuongorora nzira kuti uone zvinhu zvinoenderana nevashandisi 'kuravira uye zvavanofarira. Icho chinangwa chekupedzisira chechero injini yekukurudzira ndeyekukurudzira kudiwa uye kubata vashandisi. Kurudziro injini dzinogona kuve nemakesi akawanda ekushandisa senge muvaraidzo, e-commerce, Mobile Apps, dzidzo, etc. Kazhinji, a injini yekukurudzira inogona kuuya inobatsira pese panenge paine chikonzero chekupa zvakasarudzika mazano uye kuraira kune vashandisi.
Nei ndichifanira kuve nehanya?
Nokushandisa a injini yekukurudzira unogona kupa mazano akasarudzika kune vatengi uye kunatsiridza kuoneka kwekatalog. Chimwe chezvikonzero nei muchitoro chitoro chichiri kukosha ndechekuti muchitoro chemuviri mutengesi anonzwisisa mutengi uye anopa mazano akasarudzika. Kana iwe uchida imwe teki t-shati saka mutengesi anozoratidzira zvimwe zverudzi rwakafanana. Icho chikonzero nei tichivimba shamwari dzedu uye mhuri kumazano ndechekuti ivo vanotinzwisisa isu. Hatifanirwe kuvaudza nguva dzese zvatinoda, vanongozviziva. Nekushandisa injini yekukurudzira iwe unogona kuwana yakafanana nhanho yekuvimba. Saka kugadzira -refu vatengi vakavimbika izvo zvakakosha pabhizinesi rega rega.
Read More: Maitiro Ekugadzirisa Mitengo uchishandisa Big Data?
3 Nzira dzeKugadzira Inokurudzira Injini:
A injini yekukurudzira inogona kushanda nenzira dzakasiyana. Zvichienderana nebhizinesi rako modhi uye zvaunoda iwe unogona kugadzira imwe mune imwe yeiyi nzira nhatu:
1. Kubatanidza Kufirita:
Mukana wekusefa kwekushandira pamwe, kurudziro dzinoiswa pahwaro hwenhoroondo yemutengi. Semuenzaniso, kana Facebook uye LinkedIn, munhu wacho aizowana mazano zvinoenderana nehama neshamwari. Kana iwe uchida chimwe chinhu saka iwe unowana kurudziro zvinoenderana nehunhu hwevanhu vane yakafanana huwandu hwevanhu.
Kunyange iyi iri nzira inoshanda kwazvo kana ikashandiswa pachiyero, pane zvimwe zvidiki zvinogumira pazviri. Kuita kusefa kwakabatana injini yekukurudzira unoda huwandu hwakanaka hwe data yevatengi (kureva vashandisi vazhinji) kuti iwe ugone kuona mafambiro uye uwane vanhu vanoratidza maitiro akafanana.
2. Zvemukati-zvakavakirwa Kuchenesa:
Mune zvemukati-kusefa kusefa, zvimwe hunhu uye mazwi akakosha zvakanamatira kune chimwe nechimwe chinhu Zvichienderana nezvinodiwa nevanhu kana kusada hunhu hunopihwa huremu. Mbiri inogadzirwa kune wese mushandisi uye zvaanoda uye zvaasingadi zvehunhu hwakasiyana zvakanyorwa. Zvinhu zvinokurudzirwa kana hunhu hwazvo huchienderana neprofile yemushandisi.
Maitiro aya haanyanyo shanda sezvo zvichinetsa kubatanidza hunhu kuzvinhu uye kurudziro inozove isina kujeka. Imwe nyaya ine nzira iyi kusakwanisa kwemepu zvigadzirwa zvisina kufanana kune imwe. Semuenzaniso, iyo sisitimu yaizoshanda yekukurudzira mabhuku anoenderana nekuverenga nhoroondo asi hazvizogone kurumbidza mamwe mhando zvemukati senge mafirimu, mitambo, uye nhau pahwaro hwekuverenga nhoroondo.
3. Muenzaniso weHybrid:
Sezvo zita rinoratidzira modhi yakasanganiswa inoshandisa nzira mbiri kuendesa zvakanyatsonaka mazano. Yemhando yakasanganiswa inogona kugadzirwa uchishandisa nzira dzakasiyana senge nekuwedzera kugona kwekubatana kune yemukati-yakavakirwa modhi (kana zvinopesana), nekugadzira maviri akasiyana mamodheru uye wozobatanidza iwo kana nekugadzira yemaitiro modhi. Imwe kambani inoshandisa iyi modhi iri Netflix, iyo yakawana vazhinji vakavimbika neiyi nzira.
Nokubatanidza nzira mbiri idzi unogona kunakirwa nerubatsiro rwezvose usingatarise zvadzinokanganisa. Kunyangwe zvese izvi zvichinzwika zviri nyore, zvinoda zvakanaka data science hunyanzvi hwekugadzira chimiro chetsika. Iwe unozoda hutungamiriri hwehunyanzvi kuti ugadzire mhinduro dzinoshanda. Pakazara kushandisa pane zvakanaka injini yekukurudzira inobhadhara saka zvakanaka kugadzira inoshanda.
Read More: Nzira yekufanotaura kutenga kwevatengi nerubatsiro rweBig Data?
Nei injini zhinji dzekurumbidza dzichikundikana?
Kune akawanda plugins uye maturusi kunze uko ayo anoti anoshanda ekurudzira injini. Asi mhinduro yakavakirwa hachisi chinhu chinogona kuwedzera kukosha kubhizinesi rako. Kune akawanda kutadza kuita Kunze Uko. Kana iwe uri kugadzira a injini yekukurudzira ita shuwa kuti yako haisi pachirongwa. Hezvino zvimwe zvikonzero nei mazhinji eaya algorithms achikundikana:
Kushaikwa kweKushamisika Element: Iwe unofanirwa kushamisa vashandisi vako nemazano ako. Kana iwe ukaratidza chete imwe chete yemukati yezvinhu kana chimwe chinhu chisingazounze kuda kuziva ipapo yako system inoparadzwa. Ratidza mazano ayo vashandisi vako vangangodaro vachizvitsvaga kuti vavashamisa.
Kuputsa Kuvanzika: Paunenge uchiunganidza data zvakakosha kuti iwe uzvizivise. Kunyange munhu wese achifarira kurapwa ega, hapana munhu anofarira kugovana ruzivo rwakawandisa pa internet. Iwe unofanirwa kusazivisa ruzivo rwemushandisi kuitira kuti rukwanise kuwanikwa kana kushandiswa zvisirizvo nevanoba.
Kusiyana-siyana: kana wako injini yekukurudzira inoramba ichikurudzira rudzi rumwe chete rwemukati semhando imwechete yebhaisikopo pane munguva pfupi vashandisi vako vachafinhwa. Iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti iwe unopa dzakasiyana siyana zvemukati kuti vashandisi vako vagare vakabatikana.
Read More: 5 Dzisina kujairika nzira dzekushandisa Big Data mune zvekutengesa
Kurudziro Engines muWordPress uye Magento:
28.7% yewebhu inoperekedzwa na WordPress apo Magento yagara iri sarudzo inosarudzika ye e-commerce. Kana uri kushandisa a content management system ipapo ungadai wakanzwa nezve prebuilt injini yekukurudzira plugins. Zvinonzwika zvakanaka! Hapana chikonzero chekodhi. Hapana chikonzero chekuisa mari yakakura. Ingoisa plugin uye unakirwe. Sezvazvinonzwika sezvisingaite zvakanyanya. Kune chero kambani yehukuru hwakanaka, kuenda neyakagadzirirwa mhinduro haisi sarudzo yakanaka. Kudiwa, chigadzirwa, modhi uye vatengi vebhizinesi rega rega zvakasiyana. Iwe unoda kurudziro system yakagadzirirwa kubatsira bhizinesi rako. Nekureruka kwekuvaka tsika Magento uye WordPress, kugadzira a injini yekukurudzira hachisi chinhu chinonetsa. Tech hofori dzakadai Microsoft, vakaita enjini dzekurumbidza dzakagadziriswa kuti dziwanikwe kune kambani yehukuru hwese. Zvese zvaunoda ndeye anokwanisa data musayendisiti parutivi rwako.
At NewGenApps, isu takagadzira akawanda akabudirira ekurudzira injini. Mumwe wevatengi vedu ndiye UNBXD, kune avo vatakagadzira yekukurudzira system mune mbozhanhare app. (Tarisa Nyaya Yekudzidza Pano). Isu takagadzira auto-inoratidza algorithm yekutsigira auto-kupedzisa yemubvunzo wekutsvaga. Inoshandisa chakagadzirwa njere kuchengetedza chikafu chechigadzirwa muUnbxd cloud infrastructure kubva panotorwa data uye kuratidzwa pawebhusaiti. Kana uri kutsvaga ane hunyanzvi Developers ndiani anogona kugadzira injini dzekukurudzira dzebhizinesi rako saka iwe kutsvaga kunopera pano. Inzwa wakasununguka kutibata nesu kana kubvunza kana chirongwa.